ပွဲဦးထွက်ခါစက ထူးခြားတဲ့အဖွဲ့နာမည်​ကြောင့် ဝေဖန်သ​ရော်ခံခဲ့ရတဲ့ K-Pop အဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့ - Asia News Bar
K-pop အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက် နာမည်​ရွေးချယ်ရတာဟာ လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ အဖွဲ့နာမည်ဟာ လူတိုင်းရဲ့ စိတ်ကိုဆွဲ​ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် လှပပြီး ထူးခြားရမှာဖြစ်သလို မှတ်မိလွယ်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဖွဲ့ရဲ့ ဂီတအမျိုးအစားနဲ့ concept ကို ပေါ်လွင်​စေတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုးလည်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ တချို့​သော အဖွဲ့နာမည်​​တွေဟာ ပွဲဦးထွက်ခါစမှာ ပရိသတ်​တွေရဲ့ နှစ်သက်မှုကို မရရှိပဲ ​​လှောင်​ပြောင်သ​ရော်ခံခဲ့ရတာ​တွေရှိပါတယ်။ အခု​ဖော်ပြ​ပေးမှာက​တော့ အဲ့လိုမျိုး K-Pop အဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ Mamamoo အဖွဲ့ ပွဲဦးစထွက်ပြီး ပထမဆုံး album ဖြန့်ချီခဲ့စဉ်တည်းက သူတို့ဟာ သာမန်မိန်းက​လေးအဖွဲ့မဟုတ်​ကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။ သို့​သော်လည်း သူတို့ရဲ့ အဖွဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ Mamamoo ဟာ ထူးခြားပြီး အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်​နေတာမို့ netizen တော်​တော်များများဟာ “ဘယ်လိုမိန်းက​လေးအဖွဲ့က Mamamoo လို့ နာမည်​ပေးလို့လဲ” ဆိုပြီး စ​တွေးမိခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ရဲ့အဖွဲ့နာမည်ဟာ က​လေး​လေး​တွေ စကားစ​ပြောတတ်ချိန်မှာ အ​မေ​ကိုစ​ခေါ်တဲ့ အသံမျိုးကို အဓိပ္ပါယ်​ကောက်ပြီး မှည့်​ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဓိပ္ပါယ်ကို သိပြီး​နောက်မှာလည်း တချို့​တွေက ပိုပြီး ​လှောင်​ပြောင်သ​ရော်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ​တော့ Mamamoo ဟာ K-Pop ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ မိန်းက​လေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အ​နေနဲ့ ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြုတာကို ခံ​နေရပါပြီ။ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အရည်အချင်း​တွေကို ​ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Mamamoo အဖွဲ့ဟာ ထူးဆန်းတာမဟုတ်ပဲ ထူးခြားတဲ့အဖွဲ့ဆိုတာကို သက်​သေပြနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Gugudan ဆိုတာက​တော့ ကိုရီးယားလို “အ​လီ” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် ပရိသတ်​တွေဟာ အဖွဲ့နာမည်က ဘာ​ကြောင့်သင်္ချာ​​ဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်​နေလဲဆိုတာကို သိချင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမှန်​တော့ Gugudan ဟာ သူတို့ရဲ့ ဆွဲ​ဆောင်မှုနဲ့ အရည်အချင်း​တွေကို မတူညီတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြသသွားမယ်ဆိုတဲ့ သ​ဘောကို​ဆောင်ပါတယ်။
Gugudan ဟာ သူတို့ရဲ့ အဖွဲ့သက်တမ်းတစ်​လျှောက် ပရိသတ်​တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ စွဲကျန်​နေ​စေတဲ့ သီချင်း​ကောင်းတချို့ကို ထုတ်​လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ ကံမ​ကောင်းစွာနဲ့ပဲ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နှစ်ကုန်မှာ အဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး K-Pop ပရိသတ်​တွေက​တော့ သူတို့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အဖွဲ့နာမည်ကို အမြဲအမှတ်ရ​နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
B1A4 အဖွဲ့ကို​တော့ ​A ​သွေးပိုင်ရှင်အဖွဲ့ဝင် ၄ ​ယောက်ပါရှိပြီး B ​သွေးပိုင်ရှင်အဖွဲ့ဝင် ၁ ​ယောက်ပါရှလို့ B1A4 လို့ အမည်​ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီး လူသိများပါတယ်။ အဖွဲ့နာမည်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းပြရာမှာလည်း လွယ်ကူ​စေပါတယ်။
ဒါ​ပေမဲ့ လူသိနည်းတဲ့ တကယ့် အဓိပ္ပါယ်အစစ်က​တော့ “Be the One. All For One” ဖြစ်ပါတယ်။ ​သွေးအမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီး အဖွဲ့နာမည်ကို မှည့်​ခေါ်တယ်ဆိုတာ တချို့​တွေအတွက်​တော့ ထူးဆန်းမှာဆို​ပေမဲ့ ဒီဟာက သူတို့ကို ပိုထူးခြား​စေပြီး “Blood-dols” လို့ အမည်တွင်​စေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာ K-Pop ဒုတိယမျိုးဆက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်​ပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ သီချင်း​တွေဟာ အခုချိန်ထိ လူကြိုက်များပြီး ​အောင်မြင်​နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Sonamoo အဖွဲ့ရဲ့နာမည်က​တော့ ကိုရီးယားလိုဆို “ထင်းရှူးပင်” လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် ကိုရီးယားပရိသတ်​တွေဟာ မိန်းက​လေးအဖွဲ့နာမည်နဲ့ သစ်ပင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဆိုပြီး ​​ပြောဆိုကြပါ​တော့တယ်။ တကယ်​တော့ ဘဝတစ်​လျှောက်လုံး ဂီတကို ဖန်တီးသွားချင်တဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ ဆန္ဒကို ​ဖော်​ဆောင်ပြီး Sonamoo လို့ မှည့်​ခေါ်ထားတာပါ။
ဒီ​ဖြေရှင်းချက်က အဓိပ္ပါယ်ရှိ​ပေမဲ့ ကိုရီးယား​တွေအတွက်​တော့ ဒီနာမည်ကို အသားကျဖို့က ခက်​နေပါ​သေးတယ်။ Sonamoo အဖွဲ့ဟာ ​K-Pop ​လောကမှာ ပါးစပ်ထဲစွဲ​စေမယ့် သီချင်း​ကောင်းတချို့ကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့​ပေမဲ့ အခုအခါမှာ​တော့ သူတို့ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု​တွေက ရပ်တန့်နေတာ​ကြောင့် အဖွဲ့ရဲ့ မူလရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မကိုက်ညီသလို ဖြစ်​နေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
BTS အဖွဲ့ debut လုပ်ခါစက သူတို့ရဲ့ အဖွဲ့နာမည်အတွက် အ​တော်​လေး ​ဝေဖန်​ပြောဆိုခံခဲ့ရပြီး အဖွဲ့ဝင်​တွေ​တောင်မှ ပွဲဦးထွက်ခါစ အချိန်​တွေတုန်းက အဖွဲ့နာမည်ကို မိတ်ဆက်တဲ့အခါ ရှက်ရွံ့ခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆို​တော့ အဖွဲ့နာမည်ဟာ ကိုရီးယားလို “Bangtan Sonyeondan သို့ Bulletproof Boys” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ ​​တော်​တော်ကို တန်ဖိုးရှိပြီး K-Pop ​လောကကို ဦး​ဆောင်​နေတဲ့ ဒီနာမည်ဟာ ထိုအချိန်က “နာမည်ကို ကျည်ကာဦးထုပ်တို့၊ ကျည်ကာအင်္ကျီတို့ ​ပေးလိုက်ပါ​တော့လား”၊ “ဘယ်လိုနာမည်ကြီးလဲ” စသဖြင့် အ​တော်​လေးကို ​လှောင်​ပြောင်သ​​ရော်ခံခဲ့ရပါတယ်။
တကယ်​တော့ BTS ဆိုတဲ့နာမည်ကို မလိုမုန်းတီးမှု​တွေ အားလုံးကို ​ကျော်လွှားမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ မှည့်​ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ​​တော့ သူတို့ရဲ့ မတူညီတဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ စတိုင်​တွေ​ကြောင့် ကိုရီးယားတင်သာမက ကမ္ဘာကပါသိတဲ့ နာမည်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဘယ်သူကမှ ဒီနာမည်ကို ​လှောင်​ပြောင်ရဲမှာ မဟုတ်​တော့ပါဘူး။
Photo : dbkpop, kpopping
Next ထိုင်းသူဌေးနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ရှိနေတဲ့ Min Pechaya ရဲ့ အချစ်ရေး (နောက်ဆုံးရ အကြောင်းအရာများ) »
Previous « HYBE နဲ့ပဲ ရှေ့ဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်ကအကြောင်းအရင်း (၂) ခုအား ပြောပြခဲ့တဲ့ Jin
D.O. ရဲ့ “The Moon” ဇာတ်ကားရိုက်ကွင်းကို food truck ပို့ပေးခဲ့တဲ့ မင်းသား Kim Woo Bin
tvN ရဲ့ ‘House on Wheels’ season3မှာ အထူးအနေနဲ့ပါဝင်လာတော့မယ့် ‘Pirates 2’ အဖွဲ့သားများ